Phlomis Fruticosa စောင့်ရှောက်မှု - ကြီးထွားနေသောဂျေရုဆလင်ပညာရှင် - Xeriscape ဥယျာဉ်
Phlomis Fruticosa စောင့်ရှောက်မှု - ကြီးထွားနေသောဂျေရုဆလင်ပညာရှင်
ဂျေရုဆလင် Sage စောင့်ရှောက်မှု
Phlomis fruticosa ဂျေရုဆလင်ပညာရှိသည်ပန်းပွင့်။ အမြဲစိမ်းချုံဖုတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပညာရှိများနှင့်တူသည့်မွှေးကြိုင်သောဘဲဥပုံအရွက်များရှိသည်။ ဤအပင်တွင်အဝါရောင်နက်ရှိုင်းသော tubular ပန်းများရှိပြီးနွေရာသီတွင်အပွင့် ၂၀ ခန့်ခန့်ရှိသောအစုအဝေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤစက်ရုံသည်အီတလီ၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ တူရကီ၊ ဂရိ၊ အယ်လ်ဘေးနီးယားနှင့်ယခင်ယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံများမှဖြစ်သည်။ အင်္ဂလန်အနောက်တောင်ပိုင်းနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယား၏အချို့ဒေသများတွင်လည်းသဘာဝကျသည်။
ဤသည်မိုးခေါင်မှုဒဏ်ခံစက်ရုံတစ် ဦး အဖြစ်လူကြိုက်များရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ် xeriscape စက်ရုံ ဥယျာဉ်မှူးများအကြားယင်း၏ခံနိုင်ရည်ရှိသောသဘာဝကြောင့် သင်သည်သင်၏ဥယျာဉ်ကိုသမင်နှင့်ယုန်ကင်းစင်သောဇုန်တစ်ခုဖြစ်လိုပါကထိုလှပသောစီးဆင်းနေသောအပင်များကိုကြီးထွားရန်လိုအပ်သည်။
တောက်ပသောအဝါရောင်ပွင့်နှင့်အတူ Phlomis fruticosa ။ ရင်းမြစ် -
ဘုံအမည် (များ) ယေရုရှလင်မြို့ပြောပါ
သိပ္ပံနည်းကျအမည် Phlomis fruticosa
အမြင့် & ပျံ့နှံ့: 23-47 'အရပ်ရှည်ရှည်နှင့် 29-35' အကျယ်
ပိုးမွှားများနှင့်ရောဂါများ - သမင်နှင့်ယုန်အပါအ ၀ င်အများစုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
Phlomis fruticosa မကြာခဏတန်ဆာဆင်အပင်အဖြစ်ကြီးပြင်း (ယေရုရှလင်ပညာရှိ), အပင်မျိုးစိတ် Phlomis မှပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်အိမ်တွင်းသို့မဟုတ်ကမ်းရိုးတန်းဥယျာဉ်များရှိခြောက်သွေ့သောနေသာနယ်နိမိတ်များအတွင်းလှပစွာပေါက်ပွားသည်။ ဒီစက်ရုံမှအညိုရောင်၊ အစိမ်းရောင်အရွက်များသည် ၂-၄ လက်မ (၅-၁၀ စင်တီမီတာ) အရှည်ရှိပြီးဆံပင်ကောင်းများနှင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။
ဤအပင်၏ tubular အဝါရောင်ပန်းများသည် ၁ လက်မ (၃ စင်တီမီတာ) အထိကြီးထွားကြသည်။ ဤအပင်၏အပွင့်များနှင့်အရွက်များသည်ဆောင်းရာသီတစ်လျှောက်လုံးတွင်တည်ရှိသည်။ ဒီပန်းပွင့်လေးကပန်းဥယျာဉ်ကိုပျားတွေ၊ လိပ်ပြာတွေကိုဆွဲဆောင်တယ်။
ဂျေရုဆလင် Sage ပန်းပွင့်များ၏အနီးကပ် -up ။ ရင်းမြစ် -
စောင့်ရှောက်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည် Phlomis fruticosa အပင်များ။ USDA Plant Hardiness Zones7မှ 11 တွင်သင်နေထိုင်ပါကသင်၏ဥယျာဉ်တွင်အလွယ်တကူကြီးထွားနိုင်သည်။ ဤတွင်၎င်းကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိရှိထားရန်လိုအပ်သည်။
ဤအပင်သည်ရှင်သန်ရန်နေအပြည့်အဝလိုအပ်ပြီး၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရိပ်ထဲတွင်ကောင်းစွာမပေါက်နိုင်ပါ။ သင်၏ဥယျာဉ်ကုတင်တွင်အရှေ့၊ တောင်၊ သို့မဟုတ်အနောက်ဘက်သို့ ဦး တည်ပါ။
ဤအပင်သည်အခြောက်မှအလယ်အလတ်မှအစိုဓာတ်ကိုလိုချင်သည်။ စိုက်ပြီးတာနဲ့သူကမျှမျှတတမိုးခေါင်ဒဏ်ခံနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စက်ရုံအားရံဖန်ရံခါရေလောင်းပါစေ။ ရှင်သန်ချင်လျှင်အပတ်တိုင်းရေပေးပါ။ အပင်ကိုပူပြင်း။ လေထန်သည့်ဒေသများတွင်စိုက်ပျိုးသောအခါမှသာရေလိုအပ်သည်။
ဤအပင်များသည်များစွာသောမြေအမျိုးအစားများတွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့သည်သကြားရှိပြီးကောင်းမွန်စွာညှစ်ထုတ်ထားသောမြေဆီလွှာများတွင်ကြားနေသော pH ဖြင့်ကြီးထွားလိုကြသည်။
သင်သည်ဤအပင်များကိုနွေရာသီ၌ပျော့ပျောင်းသောခုတ်ခြင်းနှင့်နွေ ဦး ရာသီ၌ခွဲဝေခြင်းဖြင့်ပြန့်ပွားနိုင်သည်။ နွေ ဦး နှောင်းပိုင်းတွင် Phlomis အပင်များကိုသင့်လျော်သောအဖုံးအောက်တွင်လည်းမျိုးပွားနိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏အဓိကအားဖြတ်တောက်နိုင်သည် Phlomis fruticosa သို့မဟုတ်အခြားအပွင့်များအားပေးဖို့ပန်းပွင့်ပြီးနောက်ဂျေရုဆလင်ပညာရှိ။
အနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် Hardy Phlomis fruticosa ပိုးမွှားများနှင့်ရောဂါများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သို့သော်အရိပ်ရသည့်နေရာတွင်ကြီးပွားသောအခါပြproblemsနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ဥယျာဉ်၌ဤအပင်ကိုကြီးထွားနေပါကနေရောင်အောက်၌စိုက်ပျိုးရန်သေချာစေပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အရိပ်areaရိယာတွင်စိုက်ပါကသင်၏စက်ရုံသည်ရိုးတံရှည်များရှိလိမ့်မည်။
ဂျေရုဆလင် Sage စားသုံးဆီလား?
အေဒီစက်ရုံအမှန်ပင်စားသုံးနိုင်သောဖြစ်၏ သင်ကသင်၏အသားဟင်းလျာများအတွက်ဘုံပညာရှိအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင့်ခေါက်ဆွဲဟင်းချက်ရန်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်အကျွံသုံးစွဲနိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းကိုအနည်းငယ်သာအသုံးပြုရန်သေချာစေပါ။
မည်သို့သင်ဂရုစိုက်မည်နည်း Phlomis fruticosa ?
A. ၎င်းကိုကောင်းစွာညှစ်ထားသောမြေတွင်၊ နေရောင်ခြည်အောက်တွင်ရံဖန်ရံခါရေလောင်းရန်လိုအပ်သည်။